Xaflad ay ku qalinjabiyeen ardayda Jaamacadda Badda Cas (dhegayso | sawirro) – Radio Daljir
Xaflad ay ku qalinjabiyeen ardayda Jaamacadda Badda Cas (dhegayso | sawirro)
Diseenbar 23, 2018 5:52 g 0
Jaamacada Badda cas oo kamid ah Jaamacadaha Puntland ugu faca weyn, lana Aas aasay sanadkii 2008dii, ayaa waxaa ka qalin jabisay Dufcadii 7-aad .
Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay ku qalin jabinayeen Arday dhamaysatay Barashada Kulliyadaha Sharciga, Waxbarashada, Culuumta Caafimaadka, Maamulka iyo Dhaqaalaha ayaa ka dhacday xarunta jaamacadda Badda Cas ee magaalada Boosaaso.
Mas’uuliyiin ay kamid ahaayeen Wasiirka Waxbarashada Dowladda Puntland, Maamulka Gobolka iyo kan Degmada, Odayaasha Dhaqanka, Ganacsato, Ururada Bulshada, Waalidiinta Ardayda iyo wafdi ka socday Jaamacadda Al-Baxri oo ku taal Dalka Sudan iyo Jaamacadda Muqdisho ayaa ka soo qayb galay Munaasabadd waxayna hambalyo iyo dardaaran u jeexiyeen ardayda qalin jebisay ayagoo bogaadiyay sida habsamida leh ee ay Maamulka Jaamacaddu u soo agaasimay munaasabadda.
Gudoomiyaha Jaamacadda Dr Cabdullaahi Sh Xasan Cabdisalaan oo munaasabadda furay ayaa u hambalyeeyay ardayda qalin jabisay oo muddo 4 sano ah soo waday waxbarashada heerka koowaad ee Jaamacadda, wuxuuna hoosta ka xariiqay in Jaamacaddu sii wadi doonto dadaalka ay ugu jirto ilaalinta iyo kor u qaadida tayada waxbarashada gobolka oo ay ku hawlaneed 10kii sano ee ay dhisnayd.
“Waxaan u hambalyeynayaa ardayda Qalin jebinaysa, ogaada waan idin ku faanaynaa waana idin la faraxsannahay hadaan nahay bahda waxbarashada sida Wasaaradda iyo Jaamacaddaba,
Sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa Jaamacadda oo ku tilaabsatay hormar dhan walba ah waana ku bogaadinaynaa sida ay u ilaalisay tayada waxabarashada”
Sidaa waxaa yiri Prof. Abshir Aw-Yuusuf Ciise Wasiirka Waxbarashada Dowladda Puntland.
Dhanka kale xiriiriyaha Dalladda WAWA Saynab Xaaji Axmed oo ku hadlaysay afka ururada bulshada ayaa tilmaantay in Jaamacadda aysan xuduud lahayn oo meel kasta ka jirto iyadoo Jaamacadda Badda Cas ah ama Jaamacadda Muqdisho oo ay bah wadaag yihiin.
Waxaa sidoo kale Munaasabada ka hadlay masuuliyiin ka socday Jaamacada Al-Baxri ee dalka Sudan taasoo heshiis wadashaqayn laleh jaamacada, wuxuuna goobta ka sheegay Prof: Fayiz Omar Jama inay Jaamacada Badda Cas ay ka dhex furayaan xarunta Nabadaynta iyo Horumarinta ee Salaam.
Ugu dambayntii Jaamacadda ayaa Shahaado sharaf guddoonsiisay Hay’adda Tadamun iyo Shirkadaha Amal, Golis, Towfiiq iyo Shakhsiyaad kale oo kaalin ka qaatay hormarka Jaamacadda.
Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Camey oo mar kale ka dhawaajiyey arrimo xasaasi ah (daawo)